Paul Pogba markale uma ciyaari doono kooxda Manchester United. | Baidoa24.com
Home CAYAARAHA Paul Pogba markale uma ciyaari doono kooxda Manchester United.
Paul Pogba markale uma ciyaari doono kooxda Manchester United.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in maamulka Manchester United iyo ciyaartoyda kooxda ay ka war qabaan in ciyaaryahanka reer France ee Paul Pogba uusan mar kale u ciyaari doonin Red Devils, taasoo cadeyn buuxda u noqoneysa inuu ka tagayo garoonka Old Trafford inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
26 jirkan ayaa si weyn lala xiriirinayay inuu ka dhaqaaqayo kooxda Manchester United tan iyo suuqii xagaaga ee la soo dhaafay, kaddib markii xiddiga reer France uu shaaca ka qaaday rabitaankiisa ah inuu ku biiro naadiga Real Madrid.
Pogba ayaa wuxuu bar-tilmaameed koowaad ka dhiganaya macalinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane tan iyo suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay, sidaas darteed Los Blancos ayaa waxay dooneysaa inay ku guuleysato adeegiisa suuqa soo aadan ee furmi doono bisha Janaayo.
Wargeyskan ka soo baxa gudaha dalka England ayaa intaas ku daray in cid kasta ee ka tirsan kooxda Manchester United aya ka war qabto in Pogba uu ka tagi doono Old Trafford isla markaana uu dib dambe ugu ciyaari doonin.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in United-ka aysan ku iibin doonin Pogba qiima ka hooseeya 150 milyan ginni si uu ugu dhaqaaqo kooxaha xiiseenaya adeegiisa.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska Paul Pogba ee Manchester United uu dhacayo xagaaga 2021 iyadoo ay macquul tahay inuu xilli kale ku daro.
Previous articleCiidamada Dowladda Oo La Wareegay Deegaano Katirsan Gobolka Shabeelada Dhexe.
Next articleKabtanka Kooxda Liverpool Jordan Henderson oo kalsooni ka muujiyay in ay ku guuleysan doonto koobka kooxaha adduunka.